Waa maxay laurel waxtar leh: ka kooban kiimikada iyo guryaha dawooyinka ee caleen caleen
Qol kasta waxaa jira boorso caleemo qallalan. Xilliga wanaagsan ee la yaqaan ayaa dhab ahaantii haysta codsiyo aad u ballaadhan. Baag caleen waxay leedahay hanti daweyn oo qiimo leh waxayna ka caawin kartaa inay la qabsadaan cudurada iyo dhibaatooyinka qurxinta, laakiin isticmaalka noocan ah waa lagama maarmaan in la tixgeliyo khilaafaadka.
Isticmaalka malab kufsi: faa'iidooyinka iyo dhibaatada
Canola waa warshad malab sannadle ah oo loo yaqaanno carafo. Laga soo bilaabo ubaxyada rapeseed, ubaxyada dhamaadka guga, dadka soo saaro saliid, iyo shinni noqdaan malab of tayada cajiib ah. Intaa waxaa dheer, dalaggu wuxuu koray si loo soo saaro biofuels iyo sida quudinta xoolaha. Si kastaba ha ahaatee, inkastoo hantida badan ee faa'iidada leh iyo qiimaha hooseeya, kufsigu wuxuu saameyn xun ku yeelanayaa ciidda, taas oo ah sababta aysan suurtagal ahayn in lagu beero isla goobta si joogto ah, sidaas darteed goosashada malab sidaas oo kale ah lama heli karo sanad walba. (inkastoo dhalidda malab ka mid ah g ah ee kufsi u gaaro 90 kg).
Waa maxay malab yar oo macaan leh: Guryaha dawooyinka iyo ka hortaga
Honey - badeecadda ugu qiimaha badnayd oo taqaan qof walba. Qof kastaa wuu ogyahay in ay faa'iido leedahay, laakiin dad badan ma garanayaan sifooyinkiisa faa'iido leh iyo natiijooyinka wanaagsan ee lagu gaadhi karo adigoo isticmaalaya malab-macaan. Faahfaahin kooban oo ku saabsan malab ah acacia Sida laga soo xigtay beekeepers xirfad, malab acacia noqon kartaa labada huruud ah iyo whitish - dabiiciga ah waxaa jira warshad malab iyo huruud ah acacia (Robinia).
Guryaha waxtarka leh, isticmaalka iyo waxyeelada bergamot
Bergamot waxaa badanaa loo yaqaanaa shaaha la kariyey. Si loola kulmo liinta macmalka qariib ah qaabka miro waa dhibaato aad u daran, laakiin waxaad ka iibsan kartaa saliid muhiim ah dukaamada ama farmashiyaha. Iyadoo si habboon loo isticmaalo bergamot wuxuu noqon doonaa caawiye weyn oo ku saabsan qaababka qurxinta iyo bogsiinta jirka.
Wanaajinta sifooyinka walniga madow
Waqooyiga Ameerika waxay caan ku tahay walxo madow ah - warshad cajiib ah oo u egtahay walnut la yaqaan. Inkasta oo ay yihiin qaraabo dhow, sifooyinka wanaagsan ee walnut madow waxay aad uga duwan yihiin walnut. Ma taqaanaa? Way adagtahay in la isticmaalo lowska maxaa yeelay waxay leedahay duuf adag, taas oo xitaa caanuhu mar walba ma awoodaan inay jebiyaan.
Sida loo isticmaalo faa'iido iyo bogsashada guryaha ee raso sphagnum
Sphagnum - waraaqdani waxay ka fogtahay kuwa ugu caansan, sidaa darteedna uqalmaasho taxadar leh iyo daraasad taxaddar leh. Dhirta kale ee dhirta kaynta, waxa uu u taagan yahay farabadan oo dhan oo ah tayada dhabta ah ee cajiibka ah. Sphagnum waa xayawaan biyo ah, si kastaba ha ahaatee, si sax ah, geedka ma aha oo kaliya dego qoyan, laakiin waa waxa abuura.
Nivyanik: sharaxaadda, noocyada caanka ah iyo guryaha dawooyinka
Nasiib weyn oo loogu talagalay soo jiidasho leh, aan qabyo ahayn iyo muddo dheer ubax ah waxaa loo isticmaalaa beeraha warshad nivyanik. Ubaxyada, waxay kuxirantahay nooca iyo noocyada, waxay noqon kartaa mid sahlan iyo terimaad. Kordhi warshad waa mid fudud, iyo sidoo kale daryeel isaga. Waxa Nivyanik u eg yahay: Macluumaad guud oo ku saabsan dhirta Sidaas, waxa Nivyanik waa wakhti badan oo ka mid ah qoyska Aster oo leh taproot, xididdada Nivjanik waxaa lagu kala soocayaa casaan cas.
Waa maxay nasturtium waxtarka leh: guryaha dawooyinka iyo ka hortaga
Nasturtiums nalurtiums ah, dhalaalaya iyo noocyo kala duwan ayaa si wacan loo jecel yahay oo jecel beeraleyda iyo beerta, sababtoo ah ubaxyadaas quruxda leh ee aan quruxda lahayn oo si aan fiicnaynba u muuqanaysa mid xushmad leh oo sariirta ubaxa ah, terrace ama xataa balakoonka xagaaga. Waddanka nasturtiums waa Koonfurta iyo Bartamaha Afrika, warshaduna waxay u timid dalkayaga Holland waxaanay noqotey xargo iyo jecel in ay noqotey "nafteeda" waqti hore.
Safflower (thistle ama saffron American) waa warshad sannadle ah, oo gaarta dhererka 1.5 mitir, isagoo leh stem dhalaalaya, caleemo ballaaran oo leh daloolo ku yaala geesaha iyo ubaxyo orange ama jaalle ah. Sida qaalibka ah wuxuu u koraa sida warshadda cawska, laakiin mararka qaarkood koray sida mid dhaqan leh. Ma taqaanaa? Masar hore, geedka waxaa loo isticmaalay mummification - faashado ayaa lagu qooyay.
Daaweynta Kalanchoe: Qalabka daaweynta ee Kalanchoe Degremona
Wareegga adduunka oo dhan waxaa jira macluumaad badan oo ku saabsan dhirta cajiibka ah ee Kalanchoe, laakiin waxaa jira jahwareer ku saabsan noocyada Kalanchoe oo leh saameyn bogsashada. Dhamaan goobahaasi ma ku siin doonaan talooyin faahfaahsan oo la isku halleyn karo, sidaas darteed maqaalkani si buuxda ayuu u xallin doonaa dhibaatada, oo ku salaysan ilaha qaddarinta.
Waa maxay maydhashada waxtarka caafimaadka ee bani'aadamka: Qalabka daaweynta iyo ka hortagga
Bathhouse waa la yaqaan tan iyo wakhtiyadii hore sida dhirta ugu xoogan. Dhakhaatiirta Ruushka ah ee Ruushka ah ayaa daaweeyay beerka, mindhicirka mindhicirka oo leh dhererka ka soo baxa, edemas iyo burooyin ayaa laga saaray, cillado kala duwan ayaa la bogsiiyey, sidoo kale waxay u isticmaaleen cudurada dhiiga. Dhirta, marka lagu daro sifooyinka bogsashada iyo midabyo soo jiidasho leh, ayaa ah arrin ku salaysan jiilalka sunta ah.
Xijaabku waa warshad dilaacsan oo gaadhaysa ilaa laba mitir. Xilliga xagaaga, cawska ayaa ubaxsan ubaxyo yar oo jaale ah oo si qurux badan u roon. Ku dhowaad dayrta midhaha ay u bislaadaan qaabka abuurka. Inta badan waxaa loo tixgeliyaa cawska, kaas oo laga heli karo boodhka, jardiinooyinka khudradda, cagaarka kaynta.
Rosehip: waa maxay faa'iido leh iyo waa maxay ka hortagga
Dad yar ma ogaanayaan faa'iidooyinka miskaha kacsan, gaar ahaan ku saabsan feejignaanta sare ee fiitamiin C. Hase yeeshe, marka laga reebo ka-hortagga iyo daweynta hargabka, kor u kaca iyo qalabka ku salaysan iyaga ayaa leh dhowr xarumo bogsiinaya, iyo sidoo kale khilaafka. Waa maxay waxa dhabta ah, akhri waxkeena. Ma taqaanaa? Rosehip - warshad ka timid qoyska pink, waxay leedahay qiyaastii 400 nooc iyo ilaa 10 kun oo noocyo kala duwan ah.
Isticmaalka aloe iyo malab ee daawada dhaqanka ee daaweynta caloosha
Cudur kasta oo caloosha ah wuxuu u baahan yahay daaweyn degdeg ah, haddii kale cudurku wuxuu noqon karaa mid joogto ah. Sidaa darteed, haddii aad dareentay wax khalkhal ah oo ku yimid mareenka caloosha iyo mindhicirka, waa inaad caawimaad ka raadsataa dhakhtarka gaasta. Laakiin dad badan ma jecla inay booqdaan dhakhtarrada oo u jeestaan ​​daawada dhaqameed.
Faa'iidada shimbirta sare
Shimbiraha sareeya waa mid ka mid ah dhirta yar ee hareeraha qorraxda, taas oo tan iyo wakhtiyadii hore ay isku dhisteen sida kaaliye lagu kalsoonaan karo oo looga hortago cuduro badan. Shimbirta sareeya waxay caan ku tahay dhamaan noocyada kala duwan ee daawooyinka, waxaana loo qoondeeyay liiska qaar ka mid ah qaybaha ugu caansan ee alaabooyinka caafimaadka casriga ah.
Xasir dhir dhaadheer oo dhaadheer ah waa daaweyn dadweyne oo caan ah oo ka dhan ah cudurrada - sharaxaad ka mid ah hantidooda faa'iido iyo contraindications, iyo sidoo kale sawir ka dib ee maqaalka. Qeexida Warshad dilis ah ayaa ku koraa 1.5-2 meter. Geedka gaaban, fareeshka, oo xididdada yar yar. Caleemaha ayaa la fiiqay, calaamadee.
Jerusalem artichokes hantida faa'iido iyo contraindications
Immisa magacyo ayaa leh dhirtaas! Xidigta qorraxda, Jerusalem artichoke, pear earthen, Jerusalem artichoke - dhaqanka aan caan ku aheyn wuxuu caan ku yahay dalal badan oo adduunka ah. Oo mid kasta oo iyaga ka mid ah waxay og yihiin oo ku saabsan guryaha nafaqada iyo daawooyinka ee Jerusalem artichoke. Leaves iyo digriiga waxaa loo isticmaalaa cuntada, daaweynta cudurrada kala duwan, iyo sidoo kale sida quruxsan.
Waa maxay comfrey faa'iido leh?
Comfrey - cawska dilka ah ee ku kora kaymaha. Qodobkani, waxaan ku siin doonaa sawir iyo sharaxaad ku saabsan joornaalka, iyo sidoo kale sidii loo ogaan lahaa meesha uu korayo, aynu ka hadalno codsiga xididka geedka iyo khilaafka jira. Tilmaamaha Comfrey (ama zhivokost) - cawska dheer. Duurjoogta, waxay ka koreysaa aag ballaaran oo laga soo qaado Ingiriiska ilaa Japan.
Hazelnuts - faa'iido leh
Mustu waa in lagu daraa cuntada qof kasta. Marka hore, waxay yihiin nafaqo leh, marka labaadna, waxay ku jiraan borotiin, dufan caafimaad leh, iyo sidoo kale fiitamiino iyo macdano badan oo aad muhiim u ah shaqada caadiga ah ee bini'aadamka. Intaa waxaa dheer, walxaha qaarkood ee ka mid ah qaar badan oo ka mid ah, waxay gacan ka geystaan ​​dib u dhigista hawsha gabowga.
Elm grabber waxaa loo yaqaanaa sifooyinka bogsashada leh waxaana loo isticmaalaa daawada. Maqaalkani wuxuu sharxayaa sifooyinka guud ee geedkan iyo kiisaska isticmaalka dawooyinka dhaqanka iyo dhaqanka. Sidoo kale, dareenka akhristayaasha waxay bixiyaan macluumaad ku saabsan sida loo soo iibsado alaabta ceeriin ee caafimaadka. Qeexida warshadda Gramiferous Elm waa geedka dilka ah, oo ku yaalla Yurub, Bartamaha Aasiya iyo Cafiska.